Wararka - Waxaan Sharaxeynaa Faa’iidooyinka Gaarka ah ee Soo-Saarka Tamarta Qorraxda
1. Tamarta cadceedu waa tamar nadiif ah oo aan la koobi karayn, soona saarista tamarta qoraxda waa mid aamin ah oo la isku halleyn karo saameynna kuma yeelan doonto dhibaatada tamarta iyo waxyaabaha aan xasilloonayn ee suuqa shidaalka;
2, qorraxda oo ifaysa dhulka, tamarta qorraxda ayaa meel walba laga heli karaa, soosaarka tamarta qoraxda ayaa si gaar ah ugu haboon meelaha fog fog koronto la’aanta, waxayna yareyneysaa dhismaha shabakada korontada masaafada dheer iyo khadka luminta awooda;
3. Jiilka tamarta cadceedda uma baahna shidaal, taas oo si weyn u yareysa kharashka hawlgalka;
4, marka lagu daro dabagalka, soosaarka tamarta qoraxda ee tamarta qoraxda malaha qaybo dhaqaaqa, sidaa darteed ma fududa in waxyeello loo geysto, rakibistu waa sahlan tahay, dayactir fudud;
5, soosaarka tamarta qoraxda soo saari doona wax qashin ah, mana soo saari doono buuq, aqalka dhirta lagu koriyo iyo gaasaska sunta ah, waa tamar nadiif ah oo ku habboon. Rakibida nidaamka soo saarida korontada ee loo yaqaan '1KW photovoltaic power' wuxuu yareyn karaa qiiqa CO2600 ~ 2300kg, NOx16kg, SOx9kg iyo walxaha kale 0.6kg sanad walba.
6, wuxuu si wax ku ool ah u isticmaali karaa saqafka iyo derbiyada dhismaha, uma baahna inuu qaato dhul badan, baalayaasha dhaliyana tamarta qorraxda waxay si toos ah u soo qaadan karaan tamarta qorraxda, ka dibna waxay yareyn karaan heerkulka derbiyada iyo saqafka, waxay yareyn karaan culeyska qaboojiyaha gudaha.
7. Wareegga dhismaha ee nidaamka soo saarista tamarta qorraxda qorraxda waa mid gaaban, nolosha adeegga ee qaybaha soo saaridda tamarta way dheer tahay, habka soo saaridda tamarta waa mid is bedbeddela, iyo wareegga soo kabashada tamarta ee nidaamka dhalinta korontada oo gaaban;
8. Kuma xadidna juquraafi ahaan qaybsiga kheyraadka; Korantada waxaa laga dhalin karaa meel u dhow halka lagu isticmaalo.